Pfungwa iyi inoratidza iyo iPhone 13 ine notch shoma uye iri nani kamera | IPhone nhau
Ngirozi Gonzalez | 31/07/2021 11:47 | iPhone 13
ari makuhwa uye kubuda nezve iyo iPhone 13 iri kutanga kugadzira mapeji ekutanga enhau. Segore rega rega, patinosvika pamwedzi waGunyana, dhata, runyerekupe uye zvingangodaro pfungwa dzekuti chizvarwa chinotevera che iPhone chingave chakaita sei kutanga kuburitswa. Pane ino chiitiko a pfungwa itsva ye iPhone 13 Inosanganisira zvinhu zviviri zvataurwa nezvazvo kwenguva yakati rebei. Inotaridzika kuderedzwa kwechinyorwa chepamusoro uye kuvandudzwa kwemakamera kunooneswawo padanho rehunyanzvi uye dhizaini.
IPhone 13 pfungwa dzinotanga: kuverenga kusvika munaGunyana
Mhoresa kune chidiki chidiki, iyo nyowani kamera iyo inokutendera iwe kutora zvirinani mifananidzo. MagSafe bhatiri kuenda, ine 1460 mAh. Pamusoro peizvozvo, bhatiri rakakura rinogara kusvika ku1,5 nguva yakareba.
Iyi pfungwa nyowani yakaburitswa neanozivikanwa mushandisi ConceptsiPhone inoratidza iyo iPhone 13 ine nyowani nyowani yemagetsi orenji ruvara. Muchokwadi, muvhidhiyo yese tinogona kuona chimwe chitsva: ane mavara MagSafe mabhatiri. Mushandisi anofungidzira kuti Apple inogona kupa aya mabhatiri, akaburitswa vhiki rapfuura, ine furemu ruvara rweiyo iPhone 13 uye chena chena panzvimbo yemuviri wese chena sezvavanotengeswa izvozvi.
Runyerekupe runodzoka, iyo iPhone 13 ichatanga iyo inogara iri-pachiratidziri
Padanho rekushongedza, iyo pfungwa iPhone 13 yakafanana neiyo iPhone 12. Kunze kwekumwe kusarudzika: makamera. Isu tinofanirwa kuyeuka kuti isu takatarisana nemodeli iyo inongokwira iyo yakafara kona uye iyo yakakura yakafara kona uye, parizvino, iwo makamera ari munzvimbo yakatwasuka kumashure. Nekudaro, mune izvi kubatana tinoona sei iwo maviri makamera angave akatarisana akatarisana, kusiya iyo flash mune yepamusoro kurudyi quadrant uye maikorofoni muzasi kuruboshwe.
Chekupedzisira, imwe huru ruzivo rwatinokoshesa nderwe kuderedzwa kwechikona notch mumahara epamusoro. Rangarira kuti ichi notch kana notch ndiyo Face ID yakaoma iyo inosvitsa ese makamera nema sensors ayo ane basa rekupa iyo data kuvhura iyo kifaa. Apple inogona kunge yakakwanisa kudzikira uye kuomesa ma sensors aya munzvimbo diki, kubvumira kuve nekukudza kudiki kwechidzitiro, kuvimbisa kuva nenzvimbo yakati wandei mubhawa remamiriro eIOS.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 13 » Iyi pfungwa inoratidza iyo iPhone 13 ine yakaderera notch uye iri nani kamera